Soosaaraha Ugu Wanaagsan 3D & Warshad | Yilibao
EPE Ciyaar Mat
XPE Ciyaar Mat
Isku laabida Mat
XPE Laabista Mat (Edged Edge)
XPE Laabista Mat (Edge Edge)
EPE Halxiraalaha Mat
XPE Halxiraalaha Mat
Mat xujo EVA
TPU Gogosha Mat
Shaxda Carruurta Yaryar
Shaxda Carruurta oo leh Saxaro iyo Dhismo Dhismeyaal
EPE Sunta aan fiicnayn ee E-saaxiibtinimada u leh Mat Mat
XPE Ciyaaraha aan fiicnayn ee Eco-saaxiibtinimo
Waxyaabaha aan sunta lahayn iyo kuwa bey'adda ku habboon: Xidhayaasha gidaarka ee loo yaqaan 'XPE' waxay ka samaysan yihiin xumbada XPE, taas oo ah badbaado, jawi bey'adeed iyo wax aan sun ahayn.
3d warqad gidaar ah
70 * 77cm
70 * 72cm
70 * 90cm
70 * 77cm / 70 * 72cm
1. Waxyaabaha aan sunta lahayn iyo kuwa bey'adda ku habboon: Xidhayaasha gidaarka ee loo yaqaan 'XPE' waxaa laga sameeyaa xumbada XPE, taas oo ah badbaado, jawi bey'adeed iyo wax aan sun ahayn.
2. Tayo adag: Naqshadeynta qaro weyn waa mid dheg dhegan, jilicsan oo u adkeysata dharka.
3. Noocyo kala duwan: Naqshadeynta saddexda geesoodka ah ee 3D, qaab-dhismeedka saafiga ah, midabbada hodanka ah iyo kuwa kala duwan, goynta bilaashka ah.
4. Si fudud loo nadiifiyo: Biyo-diidka iyo wasakhda wasakhda, tirtiro nadiif.
Waraaqdu waa nooc ka mid ah walxaha qurxinta ee gudaha loo isticmaalo oo lagu dhejiyo darbiyada, kaas oo si ballaadhan loogu isticmaalo qurxinta gudaha ee guryaha, xafiisyada, hudheelada, hudheelada, iwm. Maaddadu kuma koobna waraaqaha, laakiin sidoo kale waxa ku jira waxyaabo kale. Sababtoo ah waxay leedahay astaamaha midabada kala duwan, qaababka hodanka ah, qaabka raaxada, badbaadada iyo ilaalinta deegaanka, dhismaha ku habboon, iyo qiimaha la awoodi karo, kuwaas oo aan la barbardhigi karin waxyaabo badan oo qurxinta gudaha ah.
Badanaa saxarka kiimikada ee loo yaqaan 'bleach' saxarka alwaaxa waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro warqad aasaasi ah, ka dibna waxaa lagu farsameeyaa habab kala duwan, sida dahaadhka, daabacaadda, samaynta ama dusha sare ee dusha, ugu dambayntiina waa la gooyaa oo la baakadeeya ka hor inta aan laga bixin warshadda. Waxay leedahay xoog gaar ah, adkeyn, muuqaal qurxoon iyo caabbinta biyaha oo wanaagsan.
Life Cimri dheer: Ku isticmaal waraaqda darbiga ah teknolojiyad wax soo saar casri ah, qalabkeeda ayaa kafiican, nolosha adeeguna way sii dheeraaneysaa.
Speed ​​Xawaaraha dhismaha waa mid deg deg ah oo nadiif ah: way adagtahay in la rinjiyeeyo darbiga waxayna ka tagi doontaa xoogaa wasakh ah, wayna adagtahay in laga saaro, laakiin marka gidaarka la dhajiyo, hadii xabagta si kama 'ah ugu daato sabuuradda ama daaqada, waxaan badanaa isticmaalnaa calal qoyan ama isbuunyo. Si dhakhso leh ayaa loo nadiifin karaa.
Styles Qaababka hodanka ah: dooro darbiga aad jeceshahay oo abuur saamayn kasta oo aad rabto.
Space Qiime ballaaran: qiimaha wuxuu buuxin karaa baahiyaha heerar kala duwan.
Bacda PE, kartoonka ama bacda leh tolmo wanaagsan.
Hore: XPE Halxiraalaha Mat
Xiga: EPE Halxiraalaha Mat
Waraaqda Xumbo 3d
Xpe xumbo Waxyaabaha Wallpaper
Xpe xumbo Wallpaper
Cinwaanka: Lambarka 534, Miaoling Village, Isgoyska Wadada Longshen iyo Wadada Afaraad ee Gongye, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha ee Lanshan, Linyi City, Gobolka Shandong, Shiinaha